अटो रोचक | Automotive News Nepal
बुलेट रानी बनिन् सोनाक्षी, बन्यो ट्रोल (भिडियो सहित)
भारतको मुम्बईस्थित व्यस्त सडकमा रोयल इन्फिल्ड बाइकमा सवार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाको तस्बिर र भिडियो हाल भाइरल बनेको छ । सडकमा सोनाक्षी सिन्हालाई देख्नासाथ पापाराजी पत्रकारहरुले समेत उनको तस्बिर लिन तँछाडमछाड गरेका थिए । त्यही समयमा अन्य गाडीबाट टा...
जब टोयोटा फर्चुनर हावामा उडेर हुन्डाई भर्ना र होन्डा सिटीमा ल्यान्ड भयो (भिडियो सहित)
आजकाल अनलाइनहरुमा विभिन्न प्रकारका डरलाग्दा भिडियोहरु देख्न पाइन्छ, जुन भिडियो हेर्दा नै धेरैको आङ नै सिरिङ्ग हुन्छ । यस्तो डरलाग्दो भिडियो हालै सार्वजनिक भएको छ । भारतको चन्डिगढमा खिचिएको सो भिडियोमा टोयोटा फर्चुनर हावामा उडेको देख्न सकिन्छ । टोयोट...
सञ्चालनमा आयो विश्वकै सबैभन्दा अग्लो पिङटाङ ग्रान्ड कंक्रिट टावर ब्रिज
चीनको पिङटाङ र लुओडियान नामक दुई पहाडी क्षेत्रलाई जोड्नका लागि संसारकै सबैभन्दा अग्लो पिङटाङ ग्रान्ड कंक्रिट टावर ब्रिज तयार भएको छ । दक्षिण पश्चिम चीनको गियाझोउ प्रान्तस्थित यी दुई पहाडी क्षेत्रलाई यसले अब सुगम रुपमा जोड्ने छ । २ हजार १ सय ३५ मिटर...
गधाको साथमा एमजी हेक्टर गाडी, ल्यायो ग्राहकलाई पैसा फिर्ता दिने अफर
हालै गधाले एमजी मोटरको एसयुभी कार तान्दै गरेको भिडियो लिक भएको छ । सो घटना पछि कम्पनीले ग्राहकको गाडी फिर्तामा १०० प्रतिशत पैसा फिर्ता वा रिप्लेसमेन्टको अफर दिएको छ । कम्पनीले सो भिडियो खिच्ने व्यक्तिलाई ब्राण्ड इमेज खराब गरेको आरोप पनि लगाएको छ । स...
जहाज दुर्घटनाको तस्बिर भयो भाइरल
गत दुई साता यता एउटा जहाज दुर्घटनाको तस्बिर समाचारहरुमा भाइरल बनेको छ । जहाज दुर्घटना आफैमा एक अत्यास लाग्दो घटना हो । तर यो दुर्घटना भने अलि फरक भएकाले पनि यसरी भाइरल बनेको हो । डेली मेलमा प्रकाशित समाचार अनुसार इटालीमा सो दुर्घटना भएको हो । जहाज द...
ट्याक्सीमा कण्डम अनिवार्य !
भारतको दिल्लीमा ट्याक्सी चालकहरु आफ्नो सवारीमा कण्डम राखेर हिँड्न थालेका छन् । यदी उनीहरुले सवारीमा कण्डम राखेनन् भने ट्राफिकले चिट काट्ने गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएको छ । भारतमा हालै परिमार्जन गरिएको ट्राफिक नियम र जरिवानामा गरिएको भारी बढोत्तरीक...
अचम्म ! यो देशमा सडकले आफैं पुर्छ सडकका खाल्डाखुल्डी
सडकका खाल्डाखुल्डीबाट को पीडित नहोला ? हाम्रोजस्तो देशमा त सरकारको पूरै कार्यकाल नै एउटा सडकको खल्डाखुल्डी सम्याउँदैमा बित्दछ, तरपनि खाल्डा उस्तै रहन्छन् । विश्वमा सडक दुर्घटनामा हुने मृत्युमध्ये एक तिहाइ ती सडककै खाल्डाखुल्डीका कारण भएका हुन्छन् ।...
भाइरल तस्बिर : २५ हजार घुस माग्दा कारमा बाँधियो भैसी
भारतको मध्य प्रदेशमा एक सरकारी अधिकारीले घुस मागेपछि सेवाग्राहीले उनको कारमा भैँसी बाँधेका छन् । मध्य प्रदेशको विदिशा जिल्लामा यो घटना भएको हो । त्यहाँका एक सरकारी अधिकारीले सेवाग्राहीसँग २५ हजार रुपैयाँ घुस मागेका थिए । आफूसँग घुस दिनका लागि रकम न...
यो हो चीन मालद्विप फ्रेन्डसिप ब्रिज, जसलाई मानिन्छ मरिटाइम सिल्क रोड
मालद्विपको राजधानी माले र यसको छिमेकी हुलहुले आइल्यान्डलाई जोड्ने चीन मालद्विप फ्रेन्डसिप ब्रिजको यो एरियल तसिबर गत सेप्टेम्बर १ मा लिइएको हो । चाइनिज कम्पनीले निर्माण गरेको सो पुल सन् २०१८ अगस्ट ३० मा उद्घाटन गरिएको थियो । सो पुल सेप्टेम्बर ७ देखि...
यस्तो आयो साम्राज्ञीको अर्को तस्बिर, गाडीभित्रै चुम्बन
यतिबेला नेपाली नायिका साम्राज्ञीको चर्चा निकै चुलिएको छ । चर्चाका लागि उनले अघिल्ला तस्बिरलाई चुनौती दिनेगरी अर्को तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनले प्रेमीलाई गाडीभित्रै चुम्वन गरेकी छिन् । उनि प्रेमी देवांश राणासँग कति गहिरो प्रेम सम्बन्धमा छिन् भ...
रेलको आवाजबाट पंक्षी जोगाउनको लागि चीनले बनायो यस्तो पर्खाल
चीनले ग्वाङडोङ प्रान्तको जिआङमेन शहरमा विश्वको पहिलो हाई स्पिड रेल न्वाइज ब्यारियर बनाएको छ । सो ब्यारियर दुई किलोमिटर लामोे छ । चीनले बनाएको सो पर्खाल ३५५ किलोमिटर लामो जिआंगमेन झांजिआंग हाई स्पिड रेलवे ट्रयाकमा बनाएको छ । सो पर्खाल निर्माणको मुख्य...
फास्ट एन्ड फ्युरियसमा जोन सिनाको इन्ट्री
हलिउडको सुपरहित एक्सन फ्रान्चाइजी फिल्म ‘फास्ट एन्ड फ्यूरियस ९’मा चर्चित रेस्लर तथा अभिनेता जोन सिना समेत देखिने भएका छन् । सिनेमाका मूख्य अभिनेता भीन डिजलले यसको खुलासा गरेका हुन् । उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा एक भिडियो पोस्ट गरेका थिए, ज...
उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति रुसमा, चढ्छन् यस्तो कार
जब उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम जोङ उन विभिन्न देशमा पुग्छन्, उनको कारको चर्चा पनि चुलिन्छ । उन हाल रुसको ब्लादिभोस्तोक पुगेका छन् । किम जोङ उन मर्सि्डिज बेन्ज एस ६०० पुलम्यान गार्ड कार ‘लिमोजिन’ चढ्छन् । अमेरिकी बजारमा सो गाडीको मूल्य...
कारको चाबीको मूल्य कति ? ४० भिटारा ब्रेजा किन्न सकिने जति
एउटा कारको चाबीको मूल्य कति पर्ला ? धेरै परे २ सय रुपैयाँ । तर विश्वमा यस्तो चाबी पनि पाइन्छ जसको मुल्यले ४० भिटारा ब्रेजा कार किन्न सकिन्छ । अवेन नामक कम्पनीले यस्तै चाबी बनाएको छ । अवेनले एस्टन मार्टिन, बेन्ट्ले, बुगाटी, मासेराटी, मेब्याक, म्याकलरे...
नयाँ अपडेटका साथ आउदै छ हिरो प्लेजर, के हुनेछ खास परिवर्तन ?
हिरो मोटोकर्पको सबैभन्दा कम मूल्यको स्कुटर ‘प्लेजर’ अब नयाँ अवतारमा आउने भएको छ । कम्पनीले हिरो प्लेजरलाई अपडेट गर्न लागेको समाचार आएका छन् । वर्तमान मोडलको तुलनामा नयाँ प्लेजरमा केही कस्मेटिक परिवर्तन देखिने छ । केही दिन अघि हिरोकी ब्र...
एकैसाथ ५ सय गाडी गुडाएर विश्व रेकर्ड
भारतमा भएको कुम्भ मेलामा गाडीको लामो र्‍याली निकालेर विश्व रेकर्ड कायम गरिएको छ। कुम्भ मेला विशेषमा ५ सय बस लगातार सँगै गुडाएर गिनिज बुकमा दर्ता गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्। यसअगाडि यसैगरी सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३९० बस लगातार सँगै गुडाएर...
यस्तो छ ब्रिटिश कार कम्पनी म्याकलरेनको हेडक्वाटर
बिट्रिश कार निर्माता कम्पनी म्याकलरेनको शानदार हेडक्वाटर इग्ल्यान्डको वुकिङ्ग शहरमा अवस्थित छ । यस हेडक्वाटरको निर्माण कार्य सन् १९९९ मा सुरु भएर २००३ मा सकिएको थियो । यसलाई म्याकलेरेन टेक्नोलोजी सेन्टरको नामले पनि चिनिन्छ । यसको निर्माणका लागि ३ स...
चढ्ने हो संसारकै हेभी वाइक ?
संसारको सवैभन्दा ठूलो मोटरसाइकल कुन होला ? यसका लागि गिनिज वुक अफ वल्र्ड रेकर्डलाई आधार मान्नुपर्छ । यद्यपि ‘ठूलो वाइक’को रुपमा गिनिज वुकमा नाम लेखाएको वाइक व्यवहारिक प्रयोजनका निम्ति उपयोगी नहुन सक्छ । त्यसैले यहा“ त्यस्तो मोटरसा...
यामाहा आर १५ बाइकको वारेमा अहिले धेरैलाई थाहा छ । तर के आरएक्स १०० को वारेमा थाहा छ ? कुनै बेला यामाहाको आरएक्स १०० निकै नै लोकप्रिय थियो । सन् ९० को दशकमा यामाहाका आरएक्स १०० का साथै आरडी ३५० र आरएक्स १३५ समेत निकै नै लोकप्रिय थिए । सवारी प्रदूषण...
बाटो विनाको एक गाँउ गिथुर्न
उत्तरी भेनिस भनेर चिनिने नेदरल्यान्डको नाम चलेको पर्यटकिय गाँउ गिथुर्न हो । यो गाउमा कुनै सवारी गुड्न सक्ने सडक छैनन् तर त्यहाँको यातायात प्रणाली आकर्षक पानीका नहरहरुबाट हुने गर्छ । सन् ११७० तिर आएको सेन्ट एलिजावेथ नामक बाढीबाट यो ठाउँको निर्माण भएक...
आयो चेन बिनाको साइकल, यस्ता छन् सुविधा (भिडियो सहित)
साइक्लिङलाई अझै सुविधाजनक बनाउनका लागि चेन बिनाको साइकल बनेको छ । पछिल्लो लिभर ड्राइभ सिष्टममा आधारित सो साइकल थोरै बल लगाउदा पनि तीव्र गतिमा चल्न सक्छ । न्युबाइक नामक सो साइकल अमेरिकाको लस एन्जेलसस्थित इन्भेन्टर रोजर पार्करले तयार गरेका हुन् । १० क...
गाडीको सेक्युरिटी सिष्टम ह्याक गर्नुस्, जित्नु १० करोड रुपैयाँ
टेस्ला मोटर्सले हालै एक ह्याकिङ प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ । सो प्रतियोगितामा कम्पनीले टेस्ला मोडल ३ इलेक्ट्रिक कारको सेक्युरिटी सिस्टममा कमी भेटाउँने व्यक्तिलाई १ मिलियम डलर अर्थात करिब १० करोड रुपैयाँको उपहार दिने घोषणा गरेको छ । जसले यो काम पहिले...
यस्ता छन् अमिताभ बच्चनका कार
भारतीय चलचित्रका सुपरस्टार अमिताभ बच्चन लक्जरी कारका शौखिन पनि हुन् । उनीसँग लगभग एक दर्जन लक्जरी कार छन् । यी सबै मध्ये उनीसँग भएको रोल्स रोयसलाई विशेष मानिन्छ, किनभने यसलाई निर्देशक विधुविनोद चोपडाले ‘एकलव्य’ चलचित्रमा प्रभावशाली अभिनय...
पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री आन्तोनियो कोस्ता सर्वसाधारणसँगै स्थानीय रुटको गाडी चढेर वडा कार्यालयमा गएका छन् । प्रधानमन्त्री एन्तोनियो बिहीबार बिहानै राजधानी लिस्बनको ७४६ रुटको सार्वजनिक बसको यात्रामा भेटिएका हुन् । बिहीबार बिहानको ७४६ रुटको बसमा प्रधान...